आज रातीबाट काठमाडौँ सहित उच्च संक्रमित क्षेत्रमा लकडाउन हुन सक्ने ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/आज रातीबाट काठमाडौँ सहित उच्च संक्रमित क्षेत्रमा लकडाउन हुन सक्ने !
काठमाडौँ – सरकारले फेरि लकडाउनको तयारी गरेको छ । विज्ञहरुसँगको परामर्श पश्चात सरकारले लकडाउनको तयारी गरेको हो।
मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढ्दै गएको कोरोना भाइरस संक्रमणका बारेमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले देशमा बढिरहेको कोरोना संक्रमण प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। समयमै गम्भीर नभए संक्रमणले थप गम्भीर अवस्था निम्त्याउन सक्ने हुँदा आवश्यक कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
छलफलमा सहभागी अधिकांशले पुन: लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने कतिपयले कडा कदम चाल्दै कर्फ्यु नै लगाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । पूरै देश लकडाउन गर्ने भन्दा पनि कोरोनाको जोखिम हेरेर क्षेत्र अनुसार लकडाउन गर्न विज्ञहरुको सुझाव थियो। बैठकमा विज्ञहरुबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।
मंगलबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा देशकै सबै भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेका थिए। उपत्यकामा लाखौंको संख्यामा नागरिक उपत्यका बाहिरबाट आएको हुँदा संक्रमितको संख्या आउने दिनहरुमा थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ। विज्ञहरु सुझाव अनुसार आज राति बाटै उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरुमा लकडाउन हुन सक्ने बुझिएको छ।
उपत्यका प्रवेश नाकामा कडाई
उपत्यका कोरोनाको केन्द्रविन्दु बन्ने खतरा देखिएसँगै उपत्यका प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण नाकामा कडाई गर्न थालिएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका अरनिको राजमार्गस्थित काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुर जिल्लाको सिमाना साँगामा हुने सवारी चाप कम गर्न दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुखबीचमा छलफल भएको छ ।
“साँगा नाकामा देखिने भीडभाड सहजरूपमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल ग¥यौँ”, उनले भने, “सवारी साधन जाँचका क्रममा हुने गरेको भीडका कारण साँगा क्षेत्रका नागरिकलाई जोखिमबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ ।” बैठकमा साँगामा भएको सुरक्षा जाँचको विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।